Indostria sy tranga / fampiharana
Sakafo sy zava-pisotro
Solika sy gazy / harena ankibon'ny tany
orinasa mpamokatra entana
Farmasia / zezika
Cooling Process / Industrial Conditioning
Cross Flow Evaporative Condenser - andiany SPL-S
Counter Flow Evaporative Condenser- Series SPL-N
Tilikambo hihena mangatsiaka mihidy
Tilikambo fanamafisana ny tadivavarana mihidy - mikoriana miampita
Tilikambo fanamafisana Loop mihidy - Counter Flow
Steel Open Loop Cooling Tower
D1, Kapila faneriterena D2
Ny ekipa sy ny kolontsainay
Serivisy sy fanampiana
FAQ / Fampidinana
Fifandraisana / endrika fangatahana
Niorina tamin'ny 2001 ny SPL ary orinasa iray an'ny Lianhe Chemical Technology Co., Ltd. (kaody fizarana 002250). SPL dia miorina amin'ny valan-javaboary tanànan'ny tanàna Baoshan any Shanghai, miaraka amina fifandraisana sy rafitra fitaterana tena tsara, akaikin'ny manodidina sy ny arabe ivelany an'ny sh Shanghai, ary 13km miala ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hongqiao, ary 12km miala ny Station Railway Shanghai. Ny orinasa SPL dia natsangana tamin'ny velaran-tany 27,000m2, izay ahitàna ny velaran-trano lehibe 18,000m2. Ny orinasa dia voamarina ISO 9001: 2015 ary manaraka tsara ny torolàlana napetraka eo ambanin'ity rafitra fitantanana kalitao ity.
Amin'ny ezaka hahitana ny zavatra tadiavinao, azafady mba azafady mba mifandraisa aminay.
Adiresy: 458 Gongye Road Baoshan District Shanghai, 200444, Sina
Telefaona: antsoy izahay izao: + 86-21-36160669
Fa maninona no mitahiry ranomandry?
Fa maninona no mitahiry ranomandry? Ny rafitra fitehirizana ranomandry dia mampiasa ranomandry amin'ny fitehirizana angovo hafanana. Amin'ny alina dia mamokatra ranomandry ny rafitra mba hitehirizana ny fampangatsiahana, ary mandritra ny andro dia mamoaka ny fihenan-tsakafo izy ireo hamaly ny fangatahana herinaratra avo indrindra. Ice stor ...
Torohevitra madinidinika momba ny fantsom-panafody SPL
Aza manao serivisy na eo akaikin'ny mpankafy, motera, na kapila na ao anaty ilay singa raha tsy mahazo antoka aloha fa tapaka, mihidy ary mivoaka ireo mpankafy sy paompy. Hamarino raha azo antoka ny fitondra moto mpankafy ...
Hiatrika revolisiona ny indostrian'ny vata fampangatsiahana
Gao Jin, Tale Jeneralin'ny Departemantan'ny Fiovan'ny toetrandro, dia nilaza fa ny herin'ny karbonina ao Shina no tena mamatotra ny karbaona dioksida ankehitriny. Ny dingana manaraka dia ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny HFC, ary ny fampiasana tsikelikely ...
Ny condenser etona dia mihatsara kokoa avy amin'ny tilikambo mangatsiaka. Ny fitsipiky ny fiasan'izy io dia mitovy amin'ny an'ny tilikambo mangatsiaka. Izy io dia mazàna mifangaro amin'ny exchanger hafanana, ny rafi-pandehanan'ny rano ary ny syst ...
Miaraha amin'ny tànana hiadiana amin'ny valanaretina
Tamin'ny 4 martsa 2020, fiaramanidina iray avy any Brezila no tonga soa aman-tsara tany Shanghai, nitondra sarontava 20 000 PFF2 nomen'ny Lianhe Chemical Technology Co., Ltd., ho an'ny Vokovoko Mena Taizhou. Andiany fahadimy ity ...